कांग्रेसमा विधान र व्यवहार दुबै परिमार्जन आवश्यक | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कांग्रेसमा विधान र व्यवहार दुबै परिमार्जन आवश्यक
कांग्रेसमा विधान र व्यवहार दुबै परिमार्जन आवश्यक
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता September 26, 2018	0 223 Views
पार्टीलाई ठूलो बनाउने र सत्तामा पुग्ने कुरा दलहरुको लक्ष नै हो  । संघ, प्रदे श र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपे क्षित नतिजा नपाउनुमा कांग्रे सले
आफ्नै कारण दे खे को छ । उसले जनता अहिले पनि कांग्रे सकै पक्षमा छन् तर जनमत हुदाह“ुदै पनि चुनाव किन हारियो त्यसको समीक्षा गर्न यतिबे ला विभिन्न तरीकाले लागे को छ । पछिल्लो पटक सभापतिहरुको राष्ट्रिय भे ला हे टांै डामा सम्पन्न भयो  । भे लाले पार्टीकै विधान संशो धन
गर्नुपनेर् र एकतावद्ध भएर लाग्नुपनेर् निष्कर्ष निकाल्यो  । जसअनुसार विधान मस् यौ दा समितिले झण्डै एक सय पृष्ठ हाराहारीको मस्यौ दा तयार गरी सुझाव संकलनका लागि प्रदे शस् तरमा सुझाव संकलन थाले को छ । पाच नं. प्रदे शको सुझाव संकलन दाङमा असो ज १२ र १३ गते हुदै छ । विधान संशो धन र दाङमा कांग्रे सको अबको गतिविधिका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले ने पाली कांग्रे स दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्कासग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
दाङमा प्रदेशस्तरीय भे ला हुदैछ ?
खासगरी ने पाली कांग्रे सको विधानको परिमार्जन र क्षे त्रको पुनर्संरचनाका लागि दे शका अन्य भागमा जस् तै दाङमा पनि यही असो ज १२ र १३ गते पा“च नम्बर प्रदे शका छ जिल्ला दाङ, बाके , बर्दिया, पूर्वी रुकुम, रो ल्पा र प्युठानको भे ला हुन लागे को हो  । विधानका के ही बुदा परिमार्जन गनेर् र क्षे त्रगत पुनर्संरचनाको कामका लागि विधान मस् यौ दा समितिले तयार गरे को मस् यौ दामा छलफल गनेर् र आवश्यक सुझाव दिने कार्यक्रम हो  ।
पार्टीको विधान नै परिवर्तन गर्नुपनेर् अवस् था आएको हो ?
राज्यको पुनर्संरचना भइसके को छ । सो ही अनुसारका हाम्रा संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपनेर् भएकाले विधानमा भएका के ही व्यवस् थालाई पनि परिवर्तन गरे र क्षे त्रको पुनर्संरचनासमे त गर्नुपनेर् भएकाले पार्टीको तल्लो तहसम्म गएर प्रजातान्त्रिक हिसावले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो  । सो ही अनुसार नै पार्टीका भातृ संघ, संगठनहरुको समे त सुझाव संकलन गरे र आउ“दो मंसिरमा हुने महासमिति बै ठकमा पे श गर्नका लागि विधान मस् यौ दा के न्द्रीय समितिले अहिले सुझाव संकलन गरिरहे को छ ।
सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउन विधान परिमार्जन गर्न लाग्या हो ?
पार्टी सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन मात्रै विधान परिमार्जन गर्न भने लागिएको हो इन, थुप्रै कुरा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बरु के हो भने पार्टी संरचनामा सभापतिलाई अधिकार दिएपछि संस् थागतढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउन र पार्टीलाई बलियो बनाउने आधार बन्छ कि भन्ने सो च कार्यकर्ता, ने ता, शुभे च्छुकहरुको हो  । सो ही अनुरुप सभापतिलाई अलिकति धे रै अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने सो चाइ पार्टीपंक्तिमा छ ।
सभापतिको मात्रै निर्वाचन गनेर् अरुचाहिँ सभापतिकै वरिपरि घुम्ने लाई मनोनित गनेर् ?
त्यसो हो इन । के ही पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गनेर् र के ही मनो नित गनेर् खालको विधान बन्छ । सभापतिको मात्रै निर्वाचन गनेर् र अरु सबै पदाधिकारी , सदस् यहरु मनो नित गनेर् भन्ने विकल्पहरु पनि हो लान् तर के ही निर्वाचनबाट र के ही मनो नित गर्दा सभापतिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो  ।
यस्तो विधिले पार्टीलाई हित गर्छ भन्ने लाग्यो जिल्ला पार्टी सभापतिहरुलाई ?
हो  । पार्टीलाई हित गर्छ भन्ने मा एक मत छांै , विश्वास छ । जस्तो के हुन्छ भने पार्टीको सभापतिलाई अधिकार भएन भने उसले काम गनैर् नसक्ने हुन्छ । अलिकति के ही काम गरौ भन्दा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आयो भने सिंगो पार्टीको हित विपरीत हुन्छ । त्यसै ले पनि सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने मा सबै को जो ड छ ।
अधिकार नहुदा नै पार्टीमा समस् या आएको हो त अहिले ?
त्यही कारणले मात्रै पार्टीमा समस् या दे खियो भन्ने त हो इन । त्यसलाई मात्रै समस् याको कारण मै ले चाहि“ मान्दै न । यसमा धे रै क्रियाकलापहरु, व्यवहारहरु छन् । ती सबै जे जस् ता त्रुटिहरु भएका छन् । त्यसलाई पनि सुधारे र जानुपर्छ र पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जसलाई संस् थागतढंगले अघि बढाएर कार्यकर्ताको पनि जुन–जुन ठाउमा जहा–जहा छन् उनीहरुको उचित मूल्यांकन गनेर् , उनीहरुको सम्मान गनेर् खालको वातावरण सिर्जना हो स् भन्नको लागि यो सबै कुराहरुलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो  ।
विधान परिमार्जनले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन्छ त ?
हो  । यसले ने पाली कांग्रे सको संगठनलाई असाध्यै बलियो बनाउ“छ, यसले धे रै कुराको परिमार्जन गर्छ । हामी त्यही हिसाबले गाउ–गाउमा जादै छौ ं ।
कांग्रे सका पार्टी संरचना पुरानै छन् । अझै विधानकै कारणले रो किएको हो उसो भए ?
समस् या अरु के ही पनि हो इन । विधानलाई परिमार्जन गरे र जा“दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लागे को चाहि“ हो  । चुनाव पनि आए । चुनावका कारणले फुर्सद पनि हुन सके न । हामी पार्टी संरचना पुनर्संरचनामा गएनौ ं । के न्द्रीय कमिटी नया“ढंगले गएका छन् तर तल्लो कमिटीहरु अहिले पनि पुरानै संरचनामा छन् । हामीलाई समय पनि भएन र अकोर् कुरा विधान परिमार्जनपछि गर्दा अझ राम्रो हो ला भन्ने पनि लागे को हो  ।
ने तृत्वले नचाहेर हो भन्छन् त ?
त्यसो हो इन । ने तृत्वले नचाहे र भएन भन्ने हो इन, त्यसो भए ने तृत्वले नचाहे को भए अहिले पनि हुने थिएन । समयको अभावका कारणले संरचना परिवर्तन गर्न नसकिएको हो  ।
यस् ता समस्याका विषयमा चुनावपछि समीक्षा नभएर हो त गुनासो आउने ?
जिल्लागतरुपमा पनि धे रै छलफलहरु भएका छन् । के न्द्रमा पनि धे रै छलफल, अन्तत्र्रिmया भएका छन् । हामीले अरुलाई दो ष दिनुभन्दा पनि हामीले आफ्ना कारणले के ही कमी कमजो री भए भन्ने समीक्षा पनि गरे का छौ ं । हामी त्यसलाई सुधार गरे र अघि बढ्न प्रतिबद्ध भएर लागिसके का छौ ं । जसलाई हामीले प्राविधिक त्रुटि पनि भने का छौ ं । अहिले पनि हाम्रो पक्षमा जनमत बढी छ । हामीमाथि जनताको विश्वास छ । चुनाव हामीले हाम्रै कारणले हारे का छौ ं ।
त्यो कारण पत्ता लगाएर निवारण गर्न ने तृत्व कति लाग्यो ?
गाउ“दे खि क्षे त्र र के न्द्रसम्म सुझाव संकलन र जनताको मत, कार्यकर्ताको मत र पदाधिकारको मत संकलन गरे का छौ ं । बुझे का छौ ं । अब राम्रो ढंगले अगाडि बढे र जानुपर्छ । ने पाली कांग्रे स दे शको जिम्मे वार पार्टी भएको नाताले पनि दे शलाई अघि डो ¥याउन सक्ने , हा“क्न सक्ने क्षमता जति कांग्रे सस“ग छ त्यति अरु पार्टीलाई दे खे का छै नौ ं । इतिहासले पनि पुष्टि गरे को छ र कम्युनिस् टहरु पनि जुनढंगले अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामीले सो चे का थियौ ं त्यो अनुसार दे खिएन । त्यसै ले अहिले हामीलाई भनिरहे का छन् जनताले कि कांग्रे स मात्रै यस् तो पार्टी हो जसले नै दे श र जनताका लागि काम गर्न सक्छ तर तपाइ“हरु सुध्रिएर जानुपर्छ । हामी अब जनताको सुझावलाई ग्रहण गरे र सो ही अनुसार एक भएर जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने काममा हामी लाग्ने छौ ं । त्यस् तै सरकारले गरे का कमी कमजो रीका विषयमा पनि हामी जनतासमक्ष लै जाने खबरदारी गनेर् काम गछौर् ं । त्यस् तै सरकारले गरे का राम्रा कामहरुको पनि समर्थन गरे र अघि बढ्ने यो जनामा हामी छौ ं ।
नीति, विधिलाई समयसापे क्ष बनाउने र आफूहरुको व्यवहार पनि सच्याएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुग्नु भो ?
हो  । त्यही निष्कर्षमा पुगे का छौ ं । हामीले जनतालाई सुसूचित गनेर् काम पनि गनेर् छौ ं । हामीले आफै ले गरे का राम्रा कामका बारे मा समे त जनतासमक्ष पु¥याउन नसके को अवस् था छ । हामी सरकारलाई मात्रै गाली गनेर् पक्षमा छै नौ ं । हाम्रा कमीकमजो रीलाई पनि सच्याएर अघि बढ्ने कुरामा स् पष्ट छौ ं तर अहिले को सरकारले जुन हिसावले कर बृद्धि, महंगी, बलात्कारलगायतका समस् या सिर्जना गरे का, नियन्त्रणमा तदारुकता दे खाएको छै न यो कुरालाई हामीले जनतामाझ लै जान्छौ ं ।
छाया सरकार बनाएरै प्रतिरो ध गनेर् भन्नु भएको थियो तर दाङमा सक्नु भएन त ?
छाया“ सरकारकै रुपमा हामीले स् थानीय सरकारलाई खबरदारी गनेर् काम गरिरहे का छौ ं । पटक– पटक हामीले सुझाव दिएका छौ ं । गलत कामको विरो ध पनि गरे का छौ ं । हामीले तुलसीपुर, घो राहीलगायतका स् थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष भे टे रै सल्लाह, सुझाव र खबरदारी गदैर् आएका छौ ं तर यो काम सामान्यरुपमा भइराखे को अवस् था हो तर हामी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने यो जनामा छौ ं । अहिले नै आधिवेहेरी नै ल्याउने भन्ने कुरा हो इन । हामीले त यो सरकार पा“च वर्षसम्म चलो स्, राम्रो स“ग काम गरो स् भन्ने मै छौ नि । तर गलत क्रियाकलापहरुको समर्थन हामी गदैर् नौ ं ।
प्रतिपक्ष खरो उत्रिनुपनेर् हो इन र ? गुटवन्दीले कांग्रे सलाई खायो भन्ने चिन्ता गरे को सुनिन्छ नि?
हो  । ने ता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शुभचिन्तकबाट चिन्ता, चासो आएको छ भने र मै ले माथि पनि तपाइ“लाई भनिसके ं । सरकारले गरे का गलत कामका विषयमा उहाहरुबाट हामीलाई जनतामा परे का मर्काका विषयमा सुनाउनुहुन्छ । त्यसै ले पनि हामी अब खरो उत्रिनुको विकल्प छै न । हामी चुप लागे र बस् ने वाला छै नौ ं ।
त्यसका लागि आफू चुस्त हुनुपर्ला, भातृसंस्थाका पुनगर्ठन, अधिवे शन पनि गर्नुपर्ला?
महासमितिको बै ठक अघि र पछि गरे र हामीले भातृ संस् थाहरुलाई पूर्णता दिदै छौ ं । जहा जहा अवधि पुगे का छन् त्यहा“ हामीले अधिवे शन गरे र जाने यो जना बनाएका छौ ं । त्यसपछि एक, डे ढ वर्षमा पार्टीको अधिवे शन पनि आइहाल्छ । त्यसलाई सो ही अनुसार अघि बढाउने छौ ं । हाम्रा भातृ संस् थाहरुलाई दे शप्रति सजग बनाउ“छौ ं । खासगरे र जनजीविकास“ग जो डिएका पक्षमा खबरदारी गनेर् काममा हाम्रा भातृ संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाएर अघि बढ्छौ ं ।
कर बृद्धि, सुविधाभो गीका समस् या कांग्रे सले जिते का पालिकामा हु“दै न भन्नुभयो । जनताले कहिले महसुस गर्न पाउछन् ?
हामीले सजग, सचे त बनाएका छौ ं । खासगरी कांग्रे सले जिते का पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरुलाई एकै ठाउमा बसाले र भने का पनि छौ ं । तर कर उठाउनै हुदै न भन्ने पक्षमा त कांग्रे स पनि छै न नि । सरकार चलाउन कर उठाउनै पर्छ तर जनताले रहर गरे र कर बुझाउने वातावरण हुनुपर्छ । मलाई से वा, सुविधा पुगे को छ । मै ले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने रहर जागो स् । तर त्यो वातावरण बनाउन कसै को ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दै न । अहिले त झन जनप्रतिनिधिहरुले पनि तलव लिने भन्ने कुराले जनतामा राम्रो सन्दे श गएको छै न । एकातिर अपे क्षित विकास हुन नसक्नु र उठे को कर जनप्रतिनिधिले तलव खाएर सके भन्ने भ्रम पर्न नदिन जनताले उठाएको कर राम्रै काममा लगाइएको छ भन्ने कुराको महसुस गराउन जरुरी छ ।
अब कांग्रे स कसरी अघि बढ्छ ?
अब हामी जनतालाई सचे त गराउने , दे शलाई समृद्धिको बाटो मा अघि बढाउने दिशामा कार्यकर्ता परिचालन गरे र अघि बढ्ने तर्फ लागे का छौ ं । जनतालाई सुख, सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने तिर हामी लागे का छौ ं । यसले कांग्रे सलाई बलियो बनाउछ र आगामी पाँच वर्षपछि कांग्रे स स् थापित हुने छ भन्ने हिसावले प्रस्तुत हु‘दै छ ।
Previous: छैठौं आदेशपछि प्रकाण्ड रिहा
Next: खाने तेल महंगिदै